Half Girlfriend… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » Half Girlfriend…
- ကုိ ထြဋ္
Posted by ကုိ ထြဋ္ on Mar 29, 2019 in Entertainment, Movies/TV, My Dear Diary | 1 comment
ကုလားကား ၾကည့္ၾကမယ္... ကုိထြဋ္ ေရးေသာစာ...
2017 ရုပ်ရှင်ကား အကြည်မထွက်ခင် ထွေလာကြည့်ပြီး ရေးထားတာ…
ဇာတ်လမ်းက3Idiots နဲ့2States ရေးသားသူ
ဒါရိုက်တာက Aashiqui2ကို ရိုက်ကူးခဲ့သူ
ထုတ်လုပ်သူက EK Villain ထုတ်လုပ်သူ
ပထမဆုံး UN မှာ ပြခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဘောလီးဝုဒ်ကား…
စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းချင်းရာ အမျိုးသမီးတွေ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရေး၊ ကျောင်းတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် အိမ်သာ အလုံအလောက်ရှိရေး…
အကြိုက်ဆုံး သီချင်းကတော့ Phir Bhi Tumko Chaahunga(Still You Want) အာဂျစ်ဆင်း ဆိုထားတာ…
အာဂျွန်ပြောတဲ့ အကြိုက်ဆုံး တော်ကီကတော့ –
“နင့်ဘဝတခုလုံး ဒီကောင်မလေးအတွက် မြုပ်နှံထားမှာလား ???
အုတ်ဂူထဲထိ ဒီအချစ်စိတ်တွေကို သယ်ဆောင်သွားမှာပါ…”
“ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး ငါကတော့ ဆက်ချစ်နေမှာပါ…”
ရှာဒ ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ စကားကတော့
” I Can Be Your Half Girlfriend … “
IMDb Rate ကတော့ 4/10 ဆိုတော့ လူကြိုက်နည်းနေတယ်ပဲ ပြောရမယ်ထင်တယ်… ကျွန်တော်ကတော့ အကြည်ရရင် ကြည့်ဖြစ်မယ် ကားတကားလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်… ဘာလို့ဆိုတော့ အရှိန်အဝါ တော်တော်ကြီးတဲ့ ဇာတ်လမ်းရေးသူ ဒါရိုက်တာ ထုတ်လုပ်သူတွေက လုပ်ထားတဲ့ကားက အချိန်ကို ဖြုန်းပစ်မယ်လို့ မထင်မိလို့ပါ…
2019 ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး ရေးထားတာ…
“အချစ်စစ်တို့ရဲ့ လမ်းက မဖြောင့်တန်းပါဘူး… မယိမ်းယိုင်မြဲမြံတဲ့ အချစ်💖💖 ကပဲ နေသာတဲ့ တနေ့🌅 ကို ခေါ်ဆောင်သွားမှာပါ…”
ဇာတ်ကား အစထဲက ရင်မောရတာ 😔😔 ကားဆုံးတဲ့ အထိပါပဲ… ကားတစ်ဝက်မှာတောင် ခဏနားရသေးတယ်… မခံစားနိုင်တော့လို့ 😪😪… သရုပ်ဆောင်တာထက် မျက်လုံးတွေက အသက်ပါလွန်းတယ်… ဘဝတခုလုံးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုက သူမနဲ့ တစ်လ၊ တစ်ပတ်၊ တစ်ရက် လောက် ဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုရင် လဲရဲတယ်… ကိုယ့်ဘဝထဲက တစ်ခါထွက်ပြေးတယ်၊ နှစ်ခါထွက်ပြေးတယ် သေပြီလို့ ပြောခဲ့တာတောင် စိတ်မှာ အရိပ်လို တွယ်ပြီး ရူးနေတုန်းပဲ… ဘယ်လို အချစ်မျိုးပါလိမ့် 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ ??? ရီယားလို့ တမ်းတမ်းတတ အော်လိုက်တဲ့ အသံနက်ကြီးက မျက်သားတွေ စွတ်စိုစေတယ်… ရည်ရွယ်ချက်၊ ပန်းတိုင်၊ ဘဝ ဘာတခုမှ ကို စိတ်မဝင်စားဘူး ခဏလေးပဲ… သူနဲ့အတူရှိတဲ့ JustaMoment but withaHalf Girlfriend…
ဒီကားကြည့်ပြီးတဲ့အချိန် IMDb Rate လဲ စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး… ရှာဒကပူးက ရုပ်ရှင်ကားပေါက်ဖို့ လာဘ်မရှိလဲ စိတ်မဝင်စားဘူး… ဇာတ်လမ်းနဲ့ ချစ်တတ်ပုံ သပ်သပ်လေး ကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီကားကို ညွှန်းပါတယ်… သက်ပြင်းတွေ အခါခါချရမယ်… အကယ်ဒမီရှော့နဲ့ မျက်ရည်မကျခိုင်းဘူး… သဘာဝကျကျ အပိုအလိုမရှိ… ဇာတ်သိမ်းထိကြည့်ဖြစ်အောင်တော့ Hint ပေးမယ် ဇာတ်သိမ်းက စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်လို့…
Ps: အိန္ဒိယကား🇳🇪တွေမှာ သဘောကျတာက Tradition ရယ် ဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်နေဆဲ issue လေးတွေကို ဇာတ်ကျောရိုးထဲထည့် ပါးပါးပုတ်ပြီး မက်ဆစ်ပေးတာလေးပဲ… စကားမစပ် theme song နဲ့ ထွေလာလဲ မိုက်ပါတယ်လို့… ထွက်တာကတော့ ၂၀၁ရ ထဲကပါ…
About ကုိ ထြဋ္
ကုိ ထြဋ္ has written 119 post in this Website..
View all posts by ကုိ ထြဋ္ →
Shar Thet Man says:
Shar Thet Man on ပြိုပြိုမေ
zaw lin on ကြေးဇူးတငျပါတယျ
Mg Yit Htoke on ကနြောျရိုကျမိခဲ့သော….၁
Mg Yit Htoke on
Shar Thet Man on ကနြောျရိုကျမိခဲ့သော….၁
zaw lin on ဒေါျအောငျဆနျးစုကွညျ ​၏အကွီးဆုံး အမှားမြား
Shar Thet Man on အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်လိုသော် (၂) – ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့်
Mg Yit Htoke on ဒေါျအောငျဆနျးစုကွညျ ​၏အကွီးဆုံး အမှားမြား
Shar Thet Man on ဒေါျအောငျဆနျးစုကွညျ ​၏အကွီးဆုံး အမှားမြား
A mar nyo on လူခြောကွီး
Shar Thet Man on ဈေးမှနျ
Shar Thet Man on အစဉျထာဝရ လေးစားလကြျပါ
နွေဦး on ဈေးမှနျ
kai on အစဉျထာဝရ လေးစားလကြျပါ
kai on လူခြောကွီး
manawphyulay on ဈေးမှနျ
manawphyulay on Learning to Write in English (17) – Prof Myo Kyaw Myint
manawphyulay on အမေ့ အမောပွလေေး Fantasia Garden နှငျ့ တဈနေ့တာ
Shar Thet Man (102064 Kyats )